Bitcoin Oo Laga Dareemayo Calaamado Muujinaya In Qiimaha La Kala Siisto Ku Wajahan Yahay… – Kiribto Somali Media
Bitcoin Oo Laga Dareemayo Calaamado Muujinaya In Qiimaha La Kala Siisto Ku Wajahan Yahay…
Isbadal dhinaca qiimaha ah ayaa laga dareemaya bitcoin, bilowga asbuucan oo dhinaca galbeedka ka bilowday, waxa soo kordhaya dadka ku gatay qiimaha $ 9.200 eeriyadeeda, oo ka rajo qaba in qiimuhu kor udhaafo $ 10.000 oo darbi adag bitcoin uu sanadka kala kulmayey dhowr jeer oo uu tagay.
Kala iibsiga bitcoin ayana todobaadkan ku bilowday $ 9.470 taas oo ah mid muujineysa rajo aad uwayn, marka loo eego todobaadkii hore oo qiimaha bitcoin uusan siwayn isu badalin.
balse bitcoin ayaa hada galaya, isbadal qiimo oo dad fara badan si wayn u hadal hayaan guda bulshada kiribto dhaxdeeda.
Dhanka kale OmiseGO shirkada hor’umarkiisa, ka shaqeysa ayaa lacag dhan $ 80 milyan, oo maal’gashi ah ka heshay maal’gashtayaal doonaya in looga shaqeeyo, wax qabadka iyo teknolojiyada Omisego network, taas oo keentay in koynka, OMG qiimihiisa uu sara ukac sameeyo 24kii saac ee ugu danbeysay.
Warbixinadaan iyo kuwa kale oo arimaha lacagaha kiribto ah ayan muuqaalkan ku falanqeyneynaa Halkan ka daawo.
Bitcoin Oo Laga Dareemayo Calaamado Muujinaya